Ngwa ngwa Cooker Akwụkwọ nri ofe (Ya mere vasatail!) - Ezi Ntụziaka
-esi mee ka na-acha ọcha chocolate curls maka garnish
kuki strawberry mix kuki na-acha ọcha chocolate ibe
mfe fajitas na taco sizinin
esi esi soseji na stovu
Crockpot dị mma maka ịsachasị ofe na mmiri nke ofe na ofe akwukwo nri a!
Ntụziaka a na-eme n'ụlọ nwere ike iji toki fọdụrụnụ, toki ma ọ bụ ọkụkọ. Ọ dị mfe, ahụike, na ọnụ ọnụ!
Ofe Nri Na-esighi Ike
Onweghi ihe kwuru nkasi obi dịka ofe dị ụtọ, ofe n’ọkụ.
ị nwere ike esi nri pasta na mmiri ara ehi
Ọ dị mfe ijikọ ọnụ n'ihi na uzommeputa na-enye ohere maka mmezi.
Jiri ihe i nwere ma hapụ ya nwayọọ esi nri ụbọchị niile!
-esi mee ka mosowu na mint
Efrata & Ọdịiche
Nke fọdụrụ toro toro , toki n'ala, ma obu obuna ọkụkọ rotisserie enwere ike iji ya na uzommeputa a!
Ntụziaka a jupụtara na nri! A na-agbakwunye poteto, eyịm, carrots, celery, tomato, ọka, na peas n’ime ofe a. Gbalịa ịtinye zucchini, mushrooms, broccoli, spinach, ma ọ bụ ọbụna kale, ihe ọ bụla ị nwere n'aka!
Ulo ozuzu okuko, basil, na pasili simmer na toki & veggies ruo mgbe flavors meld. Ngwakọta ahụ zuru oke, mana nweere onwe gị ịgbakwunye ngwa nri ndị ọzọ maka ntụgharị ọchị. Garlic ntụ ntụ, akwụkwọ bay, rosemary, ma ọ bụ thyme ga-atọ ụtọ nke ukwuu!
Thischọrọ ka esi esi nri a gbatịkwuo ya? Gbalịa itinye pasta ma ọ bụ osikapa iji mee ofe a ka ọ bụrụ nke anụ! (I nwere ike itinye broth ọzọ ma ọ bụrụ na ịtinye pasta ma ọ bụ osikapa na ofe gị.)
esi reheat a oyi kpọnwụrụ casserole
Otu esi eme ofe akwukwo nri na Turkey na ngwa ngwa
Nanị usoro ole na ole na ofe na-akasi obi ga-esi na Crockpot pụọ!
Ghaa yabasị na bọta ma dowo ya na ala nke onye na-esi ngwa ngwa ngwa ngwa.
Tinye ihe ndị ọzọ fọdụrụ ma sie nri dịka uzommeputa n'okpuru ruo mgbe nduku dị nro.
Oge nnu na ose ma jee ozi.
Atụmatụ kachasị amasị
Ekwesịrị ịmịpụ vegri oyi kpọnwụrụ ma kpochaa tupu ọ gbakwunye na ofe ma ọ ga-ebelata oge isi nri ma mee ka ofe ahụ nwee mmiri. Naanị gbaa ha n’okpuru mmiri ọkụ otu nkeji ma ọ bụ karịa.
Ọ bụrụ na ọ bụ naanị toki ọhụrụ ma ọ bụ nke oyi na-adị, pan esi anụ ahụ na skillet nwere ntakịrị ofe. Mgbe isi nri tinye ya na ofe.
Bee celery na poteto nke oma ka ha sie n'otu onu ogugu.
Ngwa nju oyi: Ozugbo ofe juru oyi, tinye ofe ahụ n'ime akpa ikuku ma debe ya na ngwa nju oyi ruo ụbọchị ise. Imirikiti ofe a hapụrụ ahapụ nwere ike ime ka ọ dị ọhụrụ site n'ịgbakwunye akwụkwọ nri ọhụrụ na oge. Nnu na ose, ntakịrị ihe na nke a, ma jee ozi!
Friza: Ghichaa ofe n'ime akpa zippered ma dee ubochi n'èzí. Debe akpa ndị ahụ na friza ma ọ bụrụ na oyi kpọnwụrụ, kpoo ha dị ka akwụkwọ iji chekwaa ohere. Ha kwesịrị ịga ihe dị ka ọnwa abụọ.
Ofe Bean Ocha - ya mere vasatail
Nduku Crockpot na Soseji ofe - mmefu ego-enyi na enyi
Nri ọka bali nke ero - nri otu ite
Ntụziaka ofe Taco - naanị 30 nkeji iji mee
20 Nkeji Broccoli Chiiz ofe - ọkacha mmasị ezinụlọ
Ndị ezinụlọ gị ha hụrụ Slow Cooker Turkey Akwụkwọ nri ofe? Jide n'aka na ịhapụ okwu na ọkwa n'okpuru!
Oge Nkwadebeiri abụọ Nkeji Oge nri7 awa 5 Nkeji Oge zuru ezu7 awa 25 Nkeji Ọrụ4 Onye edemedeHolly Nilsson Nke a dị ụtọ, ụtọ ofe dị mma maka ọrụ izu ụka, ma ọ bụ ụbọchị ọdịda oyi! Bipute Ntụtụ
▢½ yabasị okpokoro
▢6 iko ofe toki ma ọ bụ ọkụkọ efere
▢abụọ iko esie ya toki ma ọ bụ ọkụkọ
▢Ugboro 14.5 ounce mkpọ diced tomato na ihe ọ juiceụ juiceụ
▢abụọ ọkara karọt sliced
▢abụọ ọgịrịga celery sliced
▢½ iko oyi kpọnwụrụ gbazere & drained
▢½ iko peas oyi kpọnwụrụ gbazere & drained
▢1 obere nduku pee akpukpo aru ma gbue ya na cubes
▢½ ngaji ulo ozuzu okuko
▢½ ngaji basil a mịrị amị
▢abụọ teaspoons pasili ọhụrụ gbanwere
Esi nri yabasị na bọta na ọkara okpomọkụ ruo mgbe ọ ga-amalite nro, ihe dị ka nkeji 3.
Tinye na ala nke osi nri nwayọ 6qt.
Tinye ihe ndị ọzọ (ma e wezụga pasili) ma sie nri ruo awa 7-8 dị ala ma ọ bụ ruo mgbe nduku dị nro.
Bido na pasili ma jee ozi.
Iji friji, tinye ofe na akpa ikuku ma debe ya na ngwa nju oyi ruo ụbọchị ise. Reheat na ngwa ndakwa nri 1-2 nkeji na elu na ume na nnu & ose. Iji mee ka ifriizi, dọọ ofe ahụ n'ime akpa zippered ma dee ụbọchị ahụ n'èzí. Debe akpa ndị ahụ na friza ma ọ bụrụ na oyi kpọnwụrụ, kpoo ha dị ka akwụkwọ iji chekwaa ohere. Ha kwesịrị ịdịru ọnwa abụọ.
Calorisị:213,Carbohydrates:18g,Protein:iri na iseg,Abụba:10g,Abụba Ajuju:5g,Cholesterol:51mg,Sodium:1582mg,Potassium:Ogbe 861mg,Eriri:4g,Sugar:6g,Vitamin A:5647IU,Vitamin C:46mg,Calcium:87mg,Iron:3mg
IsiokwuKachasị ngwa ngwa cooker turkey akwukwo nri ofe, crockpot turkey akwukwo nri ofe, otu esi eme ofe akwukwo nri na ofe na nwayọ nwayọ, Slow cooker Turkey akwukwo nri ofe N'ezieAchịcha nri abalị, nri abalị, nri abalị, nri ehihie, isi ihe ọmụmụ, ngwa ngwa ngwa ngwa, ofe Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .